နှစ်ပတ်ကျော်ကြာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ မိုးကုတ်မှ ငါးနှစ်အရွယ် သမီးငယ်လေး စုထက်ဝိုင်း ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာ…. – Cele Oscar
နှစ်ပတ်ကျော်ကြာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ မိုးကုတ်မှ ငါးနှစ်အရွယ် သမီးငယ်လေး စုထက်ဝိုင်း ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာ….
July 1, 2021 By L YC News
မန်တလေးတိုငျး ၊ မိုးကုတျမွို့ မှ စကစ ဖွုတျခရြေး တကျကွှ လှုပျရှားသူ ကိုစိုးဌေး ၏ အသကျ ၅ နှဈအရှယျ သမီးငယျ စုထကျဝိုငျး ဇှနျလ ၃၀ ရကျက ပွနျလညျ လှတျမွောကျလာပွီး လုံခွုံတဲ့နရော ရောကျရှိပွီဟု ကိုစိုးဌေး မှ ပွောသညျ။” သမီးငယျ စုထကျဝိုငျး မနကေ့ ဖမျးဆီးခံ ထားရခွငျးမှ ပွနျလှတျလာပါတယျ၊ သမီးကွီးနဲ့ သူ့အမကေိုတော့ ဖမျးဆီးထားဆဲပါ” ဟု ကိုစိုးဌေး၏ လူမှု့ကှနျယကျတှငျ ရေးသားထားသညျ။
အကွမျးဖကျ စကစ တပျဖှဲ့ဝငျမြားသညျ မိုးကုတျ မွို့ရှိ ကိုစိုးဌေးနအေိမျသို့ အဓမ်မဝငျရောကျခဲ့ပွီး ကိုစိုးဌေး ကို မတှသေ့ဖွငျ့ ဇနီးနှငျ့ သမီးနှဈဦးကို တရားမဲ့ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားခဲ့ပွီး နှဈပတျကြျော ကွာခြိနျမှ အသကျ ၅ နှဈအရှယျ သမီးငယျ စုထကျဝိုငျး တဈဦးကိုသာ ပွနျလညျလှတျပေးခဲ့သညျ။“သမီးက အထဲမှာ ထမငျးဝအောငျမစားရဘူး၊ အိမျသာရေ နဲ့ ရခြေိုးရတယျ၊ အထဲက အကွောငျးတှေ မေးတာ ဘာ မှ ပွနျမပွောဘူး၊ စိတျဒဏျရာတှနေဲ့ ဘဝကို ဖွတျသနျးရတော့မယျ” ဟု ကိုစိုးဌေးက ဆိုသညျ။
ယခုလို သမီးငယျလေး စုထကျဝိုငျး ပွနျလညျ လှတျမွောကျရေးအတှကျ ကွိုးစား ပေးကွသော နိုငျငံတကာ အဖှဲ့အစညျးမြား နှငျ့ ပွညျတှငျးတျောလှနျရေးအငျအားစုမြားကို အထူးကြေးဇူးတငျ ကွောငျးလညျး ကိုစိုးဌေးမှ ပွောသညျ။ကိုစိုးဌေး ၏ ဇနီးနှငျ့ သမီးတဈဦးမှာ လကျရှိအခြိနျထိ ဖမျးဆီးခံထားရဆဲဖွဈပွီး ကိုစိုးဌေးနှငျ့ သားနှဈဦးမှာ မတရားဖမျးဆီး မခံရရေး ရှောငျတိမျးနကွေရသညျ။
မန္တလေးတိုင်း ၊ မိုးကုတ်မြို့ မှ စကစ ဖြုတ်ချရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ ကိုစိုးဌေး ၏ အသက် ၅ နှစ်အရွယ် သမီးငယ် စုထက်ဝိုင်း ဇွန်လ ၃၀ ရက်က ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပြီး လုံခြုံတဲ့နေရာ ရောက်ရှိပြီဟု ကိုစိုးဌေး မှ ပြောသည်။” သမီးငယ် စုထက်ဝိုင်း မနေ့က ဖမ်းဆီးခံ ထားရခြင်းမှ ပြန်လွတ်လာပါတယ်၊ သမီြး
ကီးနဲ့ သူ့အမေကိုတော့ ဖမ်းဆီးထားဆဲပါ” ဟု ကိုစိုးဌေး၏ လူမှု့ကွန်ယက်တွင် ရေးသားထားသည်။
အကြမ်းဖက် စကစ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် မိုးကုတ် မြို့ရှိ ကိုစိုးဌေးနေအိမ်သို့ အဓမ္မဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ကိုစိုးဌေး ကို မတွေ့သဖြင့် ဇနီးနှင့် သမီးနှစ်ဦးကို တရားမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး နှစ်ပတ်ကျော် ကြာချိန်မှ အသက် ၅ နှစ်အရွယ် သမီးငယ် စုထက်ဝိုင်း တစ်ဦးကိုသာ ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။“သမီးက အထဲမှာ ထမင်းဝအောင်မစားရဘူး၊ အိမ်သာရေ နဲ့ ရေချိုးရတယ်၊ အထဲက အကြောင်းတွေ မေးတာ ဘာ မှ ပြန်မပြောဘူး၊ စိတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းရတော့မယ်” ဟု ကိုစိုးဌေးက ဆိုသည်။
ယခုလို သမီးငယ်လေး စုထက်ဝိုင်း ပြန်လည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးစား ပေးကြသော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပြည်တွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုများကို အထူးကျေးဇူးတင် ကြောင်းလည်း ကိုစိုးဌေးမှ ပြောသည်။ကိုစိုးဌေး ၏ ဇနီးနှင့် သမီးတစ်ဦးမှာ လက်ရှိအချိန်ထိ ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပြီး ကိုစိုးဌေးနှင့် သားနှစ်ဦးမှာ မတရားဖမ်းဆီး မခံရရေး ရှောင်တိမ်းနေကြရသည်။
ကိုရေမွန် ကို အမှတ်ရစေဖို့ အခန်းလေးတစ်ခန်းပြုလုပ်ထားတဲ့ တောင်ကြီးကဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်……..
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ အတွဲညီညီသရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ အကို ညွန့်ဝင်း ကွယ်လွန်သွားတာကြောင့် ဝမ်းနည်းနေတဲ့ ဝါဝါဝင်းရွှေ…